Banijya News | » बढी कर तिर्ने करदातालाई अर्थमन्त्रालयको सम्मान, क–कसले पाए त सम्मान ? बढी कर तिर्ने करदातालाई अर्थमन्त्रालयको सम्मान, क–कसले पाए त सम्मान ? – Banijya News
बढी कर तिर्ने करदातालाई अर्थमन्त्रालयको सम्मान, क–कसले पाए त सम्मान ?
काठमाडौं । मंसिर ७ गते कर दिवसका दिन सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता घोषणा गरेको आन्तरिक राजस्व बिभागले उनीहरुलाई सम्मा समेत गरेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित भएको सम्मान कार्यक्रम ढिलो गरी हिजोसम्पन्न गरेको हो ।
बिहीबार अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको उपस्थितिमा क्षेत्रगतरुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्नेमा बिजयकुमार शाह सम्मानित भएका छन् । उनी रुस्सालन भोड्का, गोल्डेन ओक जस्ता रक्सी उत्पादन गर्ने हिमालयन डिस्टेलरी , ज्वलाखेल डिस्टेलरी , विजय डिस्टलेरी र एसियन डिस्टेलेरी जस्ता कम्पनीका मालिक हुन् ।
त्यस्तै सबैभन्दा गत बर्ष संस्थागत तर्फ सबैभन्दा आयकर तिर्ने सुर्य नेपाल, रमिटान्सतर्फ सबैभन्दा कर तिर्नेमा आइएमई रेमिटान्स ,निर्यात तर्फ सबेभन्दा धेरै आयकर तिर्ने बहुराष्ट्र कम्पनी डाबर नेपाल ,कृषि तथा पशुपन्छी तर्फ अन्नपुर्ण एग्रोभेट, बैंक तर्फ नेबिलल बैंक, बीमा तर्फ नेपाल पूर्नबीमा कम्पनी ,शिक्षणतर्फ मणिपाल मेडिकल कलेज , पर्यटनतर्फ तारागाउँ रेजेन्सी सम्मानित भएका छन् । त्यस्तै मध्यस्तरीय करदातामा कामना सेवा बिकास बैंक सम्मानित भएका छन् ।